शुक्रबार कतिमा हुँदैछ सुनचाँदी कारोबार? - Everest Dainik - News from Nepal
शुक्रबार कतिमा हुँदैछ सुनचाँदी कारोबार?
२०७६, ७ चैत्र शुक्रबार
काठमाडौंः नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य ५ सय रुपैयाँले बढेको छ।
बिहीबार प्रतितोला ७५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज ५ सयले बढेर प्रतितोला ७५ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
त्यस्तै, आज तेजावी सुनको मूल्य पनि बढेकाे छ । बिहीबार तेजाबी सुन तोलामा ७४ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । तर, आज बढेर तेजावी सुन प्रतितोला ७५ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
याे पनि पढ्नुस आज कतिमा कारोबार हुदैछ सुनचाँदी?
यसैगरी शुक्रबार चाँदीको भाऊ पनि बढेको छ । बिहीबार ६ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज २० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ७ सय पुगेको महासंघले जनाएको छ ।